Nagu saabsan | LINCLASTN ALBAABKA SOO SAARKA INC
WAAN SAMEEYNAA QAYBAHA AWOODAHA AWOODAHA LEH
Waxaan ku siinnaa heerar sare oo waxqabadka qaybaha nidaamyada albaabka laga soo galo.
LincLastn In ka badan 20 sano oo waayo-aragnimo ah, waxaan ku siineynaa heerar sare oo waxqabad qayb ah nidaamyada albaabka laga soo galo.
Siinta feejignaanta faahfaahinta shaqeynta iyo qaabeynta, oo ay weheliso tikniyoolajiyadda casriga ah, LincLastn waxay keentay adkeysi iyo qiimo labadaba nidaamyada gelitaanka ee soo gala. Waxaa naga go'an inaan hagaajino dhaqanka dhisida alaab tayo leh, nidaamyo iyo habab ku tiirsan waxqabadka isla markaana siiya qiime aan caadi aheyn dhammaan qiimaha wax soo saarka iyo adeegyada warshadaha.
LASTNFCAYAARTM qaybaha albaabbada awood u leh. Laga soo bilaabo cidhiidhiga albaabka dibedda ee qudhmay, illaa xaaqidda hoose, waxaan ka samaynaa qaybo albaabka dibedda ka mid ah oo si fiican u shaqeeya, rakibna dheereeya oo dheereeya.
LASTNFCAYAARTM qaybaha albaabku waa iskudhaf PCV ah oo la soo saaray iyada oo aan qudhmin, warping iyo kala. Iyagu waa kufsashada nidaamka albaabka laga soo galo.
LASTNFCAYAARTM qaybaha albaabku waxay bixiyaan tayada, amniga iyo ilaalinta nidaamyada laga soo galo.
Nala soo xiriir maanta si aad wax uga weydiiso su'aalaha albaabbada WPC, T-baararka, bulukeetiyada, iyo sidoo kale T-astragals.